“ရှုတင်နားပြီးထဲက အပူရှပ်ပြီး နေမကောင်းဖြစ်နေတာ အခုထိ မကောင်းလာသေးဘူး ဆိုတဲ့ သက်မွန်မြင့်” - Cele Connections
“ရှုတင်နားပြီးထဲက အပူရှပ်ပြီး နေမကောင်းဖြစ်နေတာ အခုထိ မကောင်းလာသေးဘူး ဆိုတဲ့ သက်မွန်မြင့်”
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး အောင်မြင်နေတဲ့ မင်းသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ သက်မွန်မြင့်ကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်နဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ သက်မွန်မြင့်ကို ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးလေးနဲ့ ချစ်သက်လို့ ခေါ်ကြပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ အမြဲပျော်ရွှင်နေတဲ့ ချစ်သက်လေးရဲ့ အကျင့်လေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက အချစ်လေးတွေ ပိုနေရတာပါ..။
ချစ်သက်က လက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့် ရှုတင်တွေ နားထားရပြီး အိမ်မှာပဲ သားနဲ့သမီးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာ အချိန်ကုန်ဆုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီနေ့ ဧပြီလ (၅)ရက်နေ့မှာတော့ ချစ်သက်လေးက “Hello Sunday! Covid အကြောင်းတွေပဲ တင်နေလို့ စိတ်ညစ်နေမှာစိုးလို့ ကိုယ့်ကို မေ့သွားမှာလည်းစိုးလို့..။ (ရှုတင်နားပြီးထဲက အပူရှပ်ပြီး ခုထိ နေကောင်းကောင်း မကောင်းနိုင်သေးလို့ ပျောက်နေတာပါနော်..။ video လေးတွေ လည်း တင်ပေးပါဦးမယ်နော်) ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ကြမယ်။ အိမ်မှာ နေကြမယ်နော်။ ချစ်တယ်။” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။
ရှုတင်နားတဲ့ အချိန်တည်း အပူရှင်ပြီး နေမကောင်းဖြစ်နေတာမို့ ပျောက်နေတဲ့ သူမကို စိုးရိမ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် စိတ်မပူဖို့ ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ချစ်သက်လေးက အခုထိ နေကောင်းကောင်း မကောင်းနိုင်ဖြစ်နေသေးတဲ့ပုံပါပဲနော် ပရိသတ်ကြီ..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း အပူရှပ်ပြီး နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ သက်မွန်မြင့်လေးအတွက် အာပေးစကားပြောပေးသွားပါဦးနော်..။
Source: Thet Mon Myint’s Facebook
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နာမညျကွီး အောငျမွငျနတေဲ့ မငျးသမီးတှထေဲက တဈယောကျအပါအဝငျဖွဈတဲ့ သကျမှနျမွငျ့ကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြနဲ့ အားပေးမှုတှကေို ရရှိထားတဲ့ သကျမှနျမွငျ့ကို ပရိသတျတှကေ ခဈြစနိုးလေးနဲ့ ခဈြသကျလို့ ချေါကွပွီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနဲ့ အမွဲပြျောရှငျနတေဲ့ ခဈြသကျလေးရဲ့ အကငျြ့လေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှကေ အခဈြလေးတှေ ပိုနရေတာပါ..။
ခဈြသကျက လကျရှိအခွအေနတှေကွေောငျ့ ရှုတငျတှေ နားထားရပွီး အိမျမှာပဲ သားနဲ့သမီးနဲ့အတူ ပြျောရှငျစှာ အခြိနျကုနျဆုံးနတောပဲဖွဈပါတယျ..။ ဒီနေ့ ဧပွီလ (၅)ရကျနမှေ့ာတော့ ခဈြသကျလေးက “Hello Sunday! Covid အကွောငျးတှပေဲ တငျနလေို့ စိတျညဈနမှောစိုးလို့ ကိုယျ့ကို မသှေ့ားမှာလညျးစိုးလို့..။ (ရှုတငျနားပွီးထဲက အပူရှပျပွီး ခုထိ နကေောငျးကောငျး မကောငျးနိုငျသေးလို့ ပြောကျနတောပါနျော..။ video လေးတှေ လညျး တငျပေးပါဦးမယျနျော) ကနျြးမာရေး ဂရုစိုကျကွမယျ။ အိမျမှာ နကွေမယျနျော။ ခဈြတယျ။” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။
ရှုတငျနားတဲ့ အခြိနျတညျး အပူရှငျပွီး နမေကောငျးဖွဈနတောမို့ ပြောကျနတေဲ့ သူမကို စိုးရိမျနတေဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ စိတျမပူဖို့ ပွောလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ ။ ခဈြသကျလေးက အခုထိ နကေောငျးကောငျး မကောငျးနိုငျဖွဈနသေေးတဲ့ပုံပါပဲနျော ပရိသတျကွီ..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး အပူရှပျပွီး နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့ သကျမှနျမွငျ့လေးအတှကျ အာပေးစကား ပွောပေးသှားပါဦးနျော..။
ကိုယ်ပြောခဲ့တဲ့ စကားကို တကယ်ပဲ တည်ခဲ့တဲ့ မင်းသားချောလေး ကျော်ထက်အောင်ကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
(၂၄)နာရီအတွင်းမှာ ကြည့်ရှုသူ သန်းနဲ့ချီရှိတဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Ah Boy နဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုတို့ရဲ့ “အငွေ့အသက်များ” သီချင်း MV
“ပျံ့နှံ့နှုန်း မြင့်မား လာတာကြောင့် ရောဂါအခံ ရှိတဲ့သူတွေကို ပိုပြီး သတိထားနေထိုင်ဖို့ သတိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ မေမီကိုကို”
“သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ အမိုက်စား မွေးနေ့ကိတ်လေး လက်ဆောင်ပေးဖြစ်ခဲ့တာလေးကို မျှဝေလာတဲ့ Ar-t”